Noveembare 26, 2017
Waxaad rumaysan tahay, kukalsoon tahay, oo ku dheggan tahay rumaysadkaas noloshaada oo dhan. Haddii haddaba aan sidaas rumaysan nahay, maxaa keenay in sida badan kiniisadaha masiixyiiinta lagu arko sida inaan lagu dhiiranaanin rumaysadka Masiixa?
Noveembare 12, 2017
Noveembare 05, 2017
Walaalkeen Doeg Schroeder wuxuu nala wadaagayaa ahmiyadda ay leedahay inaan lahaano adadayg markay joogto waxyaalaha aasaaska u ah qorniinka, iyoinaan ilmaha barno inay ku fara adaygaan mabadiida qorniinka aasaaska u ah. wuxuu aabbayaasha ku adkaynayaa inay ilmaha u dabcaan markay joogta waxa ay rabaan, laakiin markii ay joogto qorniinka waa in lagu adkeeyaa inaanay tanaasul muujinin.
Walaalkeen Doug Schroeder wuxuu haatan inagala hadlayaa masiibada iyo sida ugu habboon oo loogu diyaargaroobo si aanay inoogu noqon wax qaflad ah.
Arrin Caalami ah
Walaalkeen Doeg Schroeder wuxuu inala wadaagayaa arrin caalami ah. Waana dhalashada Ciise Masiix. Haddaba, dhalashada Ciise Masiix asbaab ayey ku timid. Maxay ahayd asbaabtii keentay dhalashada Ciise Masiix? Sii dhegayso si aad ku ogaato.
Walaalkeen Doeg Schroeder wuxuu halkan inoogu sharraxayaa macnaha farxadda dhalashada Masiixa iyo wixii Masiixu u yimid oo ah furashadeenna.
Jannaayo 02, 2022
Casharkan wuxuu walaalkeen uga hadlayaa dhalashada labaad. Wuxuuna ka eegayaa dhinacyo kale si aan wax badan uga fahanno dhalashadan labaad. Dehgaysi wacan.
Maarso 06, 2022
Casharkan walaalkeen Doug Schroeder wuxuu inagala hadlayaa madaxbannaanida Ilaah u leeyahay qorshayaasheenna. wuxuuna ina tusmaynayaa arrmo muhiim ah oo ay tahay inaan fahanno.
Diseembar 19, 2021
Casharkan caawa, waxaa walaalkeen Douglas inoogu sharraxayaa maaddada ku saabsan Nimcada Ilaah iyo baaxaddeeda. Sii dhegayso si aad wax badan uga fahanto umuurtaas.
Abriile 18, 2021
Waxaa walaalkeen Doug Schroeder uu maanta eegayaa maaddo kale oo muhiim ah, oo welibana uu dinac kale ka eegayo. Waa siismadii Ilaah siiyey Ibraahim Wiil, haddana lagu yiri u bixi wiilka sida qurbaan oo kale. Sii dhegayso si aad ku ogaato qisada
Luulyo 05, 2020
Waxaa mawduucan uu kaga hadlayaa walaalkeen Schroeder xaalka ku saabsan kaamilnimada oo ah wax dad badani ay jecel yihiin.
Raadi Kutubka Baybalka
Danta iyo Waxqabadka
Xanuun iyo Silic
Cilmiga Kitaabka iyo Waxbaridda